ProPrompter: Kuita Kutarisana Nemaziso neWebcam Yako Webhu | Martech Zone
China, May 2, 2013 Mugovera, December 5, 2015 Douglas Karr
Kuita kusangana kwemaziso kwakakosha kana iwe uri kushandisa yako kamera. Guy Kawasaki aigovana kuti sei iye inoisa yake webhu kamera pane chetatu pamberi peyake monitor kuitira kuti ive hurukuro yakasununguka paanenge achitaura nevanhu pama hangout. Scott Atwood weGoogle vakapinda mukati uye vakanongedzera chinotyisa chidiki diki kuti zvinhu zvive nyore.
ProPrompter Desktop chishandiso chakaita seperiscope chaunogona kukwira pane yako laptop kana desktop yekutarisa iyo inoendesa zvakare chiratidzo chekamera yako kubva kumusoro kwescreen kuenda kwauri kutarisa. Kunyangwe iwe uchimhanyisa teleprompter application kana kutaura pavhidhiyo, iwe unongoisa iyo hwindo mukati memiganhu yechigadzirwa.
Iye zvino unogona kurekodha mavhidhiyo kana kubata mavhidhiyo zvikamu apo iwe uri kutarisa maziso nevateereri vako!
Tags: bodelinziso nezisoproprompterseeeyeeseeyetwoeyeteleprompterWebcam
Iyo Yakanyanya Kushambadzira Nhare Kunyorera! Shanduro 3
May 3, 2013 pa 10: 57 AM
"SeeEye2Eye… inonongedza zvakare kuona kwekamera yako kubva pamusoro pechidzitiro kuenda kwawakatarisa."
Chaizvoizvo, zvinoita sekunge inoratidzira iyo vhidhiyo mufananidzo wemunhu wauri kutaura naye vhidhiyo uye unopa girazi rinotarisa pamberi pako wega cam. Saka sezvaunotarisa pamufananidzo wakaenzanisirwa, maziso ako ari kunyanya kunangidzirwa kukamera yako. Kunze kwekunge ndiri kusanzwisisa zvinhu. 🙂
May 3, 2013 pa 11: 00 AM
Unogona kunge uchitaura chokwadi @markfrisk: disqus! Ndiri kutarisira kuwana imwe uye kuyedza iyo !!!
May 14, 2017 pa 3: 23 PM
Douglas, iwe wakadaro?
May 17, 2017 pa 10: 58 PM
Chokwadi, kwete. Ini chaizvo handifarire kunyora chero ehurukuro dzangu pamhepo kungave kuburikidza nepodcast kana vhidhiyo. Izvo hazvisi "kunzwa" zvakasikwa kwandiri.
May 6, 2013 pa 3: 38 PM
Kambani yangu inogadzira mutauri vhidhiyo (http://www.liveonpage.com). Makore matanhatu atanga tichiita izvi, isu tiri nezve iyo chete kambani inotaurira vatengi kuti vashandise hafu-yemuviri mharidzo. Chikonzero iko kutarisana kwemaziso kunoitwa. Isu tinoona kuti mwero wekushandurwa, nguva dzekutarisa uye mabhureji emitengo zvese zvinoratidza kuti kusangana-kweziso kunoita mutsauko. Iyo yakazara-muviri inowanzo gimmick. Inguva chete yatinoona musoro kune chigunwe kupfurwa ndeye apo mumwe munhu ari mhiri kwekamuri, uye nekudaro isu tinovarega.